दाँया हात नै नभएका अशक्त दम्पती हत्यामा संलग्न ! « Lokpath
12 August, 2020 12:39 pm
दाँया हात नै नभएका अशक्त दम्पती हत्यामा संलग्न !
प्रकाशित मिति : 12 August, 2020 12:39 pm
काठमाडौं । गत सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा दम्पती हत्यामा संलग्न अभियुक्त सार्वजनिक कार्यक्रमा बेलौरी नगरपालिका–७ का ३५ वर्षीय दिनेश रानाको शारीरिक अवस्थाले ध्यान तान्यो । दाँया हात नै नभएका अशक्त अभियुक्त रानाले ज्यान मार्ने जस्तो जघन्य अपराधिक घटनामा कुन भूमिका निभाए होलान् भन्ने सबैको चासोको विषय पनि बन्यो ।
दश दिनअघि मध्यरातमा कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–७ भगतपुरका घनश्याम खातीको घरमा अज्ञात समूहले धारिलो हतियार प्रयोग गरी आक्रमण गर्‍यो । आक्रमणबाट खातीका श्रीमती ६८ वर्षीया बेलीदेवी खातीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएका वृद्ध घनश्यामको आइतबार राति उपचारका क्रममा कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
खातीकै छिमेकी ५३ वर्षीय प्रकाश ऐरले बोक्सीको आरोप लगाउँदै चार लाख दिएर हत्या गर्ने योजना बुनेको प्रहरीले खुलासा गरेको छ । खातीको हत्या योजना बनाएका ऐरले कृष्णपुर नगरपालिका–२ का ४५ वर्षीय रबि राना (भर्रा) को गतिलो साथ पाए ।
योजनाअनुसार नै अशक्त रानाले मोटरसाइकलमा घटनापछि खातीका छोरा राजेश खातीलाई घरमा लैजानेदेखि आक्रमण गर्ने रविलाई घर पुर्‍याउनेसम्मको काम गरेको देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमरबहादुर थापाले बताए ।
रानाले मोटरसाइकलको एक्सलेटर नै बाँया हाततर्फ जडान गरेको पाइएको छ । “अशक्त भएपनि राना दक्षिणतर्फ नेपाल–भारत सीमानामा मलखाद, कुखुराका चल्ला अवैध नाकाबाट ल्याउने गिरोहमा समेत सक्रिय रहेछ ।” उनले भने–“राना त्यो क्षेत्रको तस्कर नै रहेको पाइयो ।”
अभियुक्त राना सीमा क्षेत्रमा युवा समूहलाई तस्करीमा परिचालन गर्ने गरेको समेत प्रहरी भनाइ छ । “प्रहरीमै उजुरी नआएपनि गाउँमा त्यसको गतिविधि ठीक रहेनछ ।” प्रवक्ता थापाले भने–“खाती दम्पतीको हत्याको दोस्रो दिन हामीले दिनेश र खातीका छोरा राजेशलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएका थियौँ ।”
घटना अनुसन्धानकै क्रममा राजेशको संलग्नता नदेखिएपछि रिहा भएका छन् । “दिनेश र होरीले घटनाका बेला राजेशलाई मादक पदार्थमा लठ्ठ बनाएर फकाएर राखेको देखिन्छ” प्रवक्ता थापाले भने । झण्डै दुई दशकअघि रानाले बिजुलीको पोलमा चढ्ने क्रममा करेन्ट लागेको हात गुमाएको एक स्थानीयले बताए । “यहाँ अवैध नाकाबाट तस्करी गर्न थालेको वर्षौं भइसकेको थियो ।” स्थानीयले भने–“तस्करी हुँदै आज गाउँमै जघन्य अपराधमा समेत सामेल भएछ ।”
एक जना पनि कोरोना संक्रमित नभएका यी ५ जिल्ला
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमित शुन्य रहेका ५ वटा जिल्लाहरु रहेका छन् ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरसहित यी ७ जिल्लामा छन् ५०० भन्दा बढी उपचाररत कोरोना संक्रमित
काठमाडौं । बितेको २४ घण्टामा नेपालमा थप १ हजार ५१३ जनामा कोरोना भाइरस
काठमाडौं । नेपालमा बितेको २४ घण्टामा थप ७ सय ३१ जना कोरोना संक्रमण
म्याग्दी । कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले लामो समयदेखि बाँझो रहेको जमिन उपयोग गरेर
ललितपुरका ११४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरसहित यी ७ जिल्लामा छन् ५०० भन्दा…